1 Madzimambo 7 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Bhuku Rekutanga reMadzimambo 7:1-51
Zvivakwa zvemuzinda waSoromoni (1-12)
Hiramu uyo aiva neunyanzvi anobatsira Soromoni (13-47)
Mbiru mbiri dzemhangura (15-22)
Dziva resimbi yakanyungudutswa (23-26)
Zvingoro 10 uye mabheseni emhangura (27-39)
Midziyo yegoridhe inopera kugadzirwa (48-51)
7 Soromoni akaita makore 13 achivaka imba yake,*+ kusvikira imba yake yese yapera.+ 2 Uye akavaka Imba yeSango reRebhanoni+ yakareba makubhiti* 100, yakafara makubhiti 50, yakakwirira makubhiti 30. Imba yacho yakanga yakagara pamitsara mina yembiru dzemusidhari; uye pamusoro pembiru dzacho paiva nematanda emusidhari.+ 3 Yakarovererwa mapuranga emusidhari pamusoro pematanda aiva akagara pambiru. Paiva ne45, mutsara mumwe nemumwe uine 15. 4 Paiva nemitsara mitatu yemahwindo ane mafuremu, uye hwindo rimwe nerimwe rakanga rakatarisana nerimwe hwindo mumitsara mitatu yakanga yakaturikidzana. 5 Masuo ese nemagwatidziro* aiva nemafuremu ane mativi mana akaenzana,* sezvakanga zvakaita kumberi kwemahwindo akanga akatarisana ari mumitsara mitatu. 6 Akavaka Vharanda reMbiru rakareba makubhiti 50, rakafara makubhiti 30, uye pamberi paro paiva nerimwe vharanda raiva nembiru nedenga. 7 Akavakawo Imba yeChigaro* cheUmambo+ maaizotonga ari, iyo Imba Yekutongera,+ uye vakainamirira mapuranga emusidhari kubva pasi kusvika pamatanda edenga. 8 Muzinda waaizogara, uyo waiva kune chimwe chivanze,+ wakanga uri kumashure kweImba yacho uye wakanga wakafanana nayo pamavakirwo. Soromoni akavakirawo mwanasikana waFarao waakanga aroora+ imba yakanga yakafanana neImba yacho. 9 Zvese izvi zvakavakwa nematombo anodhura+ akavezwa achiyerwa sezvaidiwa, akachekererwa mukati nekunze nemasaha ekuchekesa matombo, kubva pafaundesheni kusvika kumusoro kwemadziro, uye panze kusvika kuchivanze chikuru.+ 10 Faundesheni yakavakwa nematombo akakura chaizvo uye anodhura; mamwe matombo akanga akareba makubhiti 10, mamwe akareba makubhiti 8. 11 Pamusoro pawo paiva nematombo anodhura akanga akavezwa aine ukuru hwaidiwa, uye paivawo nematanda emusidhari. 12 Chivanze chikuru chakanga chakatenderedzwa nemadziro aiva nemitsara mitatu yematombo akavezwa, nemutsara wematanda emusidhari, sezvakanga zvakaitawo chivanze chemukati+ cheimba yaJehovha nevharanda reimba.+ 13 Mambo Soromoni akatuma vanhu kunoshevedza Hiramu+ vakauya naye kubva kuTire. 14 Aiva mwanakomana wechirikadzi yekudzinza raNaftari, uye baba vake vaiva vekuTire, vari mupfuri wemhangura;+ uye aiva neunyanzvi hwakakura nekunzwisisa+ neruzivo rwekuita mabasa emarudzi ese aishandiswa mhangura.* Saka akauya kuna Mambo Soromoni akaita basa rese raakapiwa. 15 Akagadzira mbiru mbiri dzemhangura;+ mbiru imwe neimwe yakanga yakareba makubhiti 18, uye paida tambo yakareba makubhiti 12 kuti upoteredze mbiru imwe chete.+ 16 Akagadzira misoro miviri yemhangura kuti aiise pamusoro pembiru dzacho. Musoro mumwe chete waiva wakareba makubhiti 5, mumwe wacho wakarebawo makubhiti 5. 17 Musoro wembiru imwe neimwe waiva nemambure aiva necheni dzakaupoteredza;+ mambure emusoro mumwe nemumwe aine zvikamu 7. 18 Akagadzirawo mapomegraneti* ari mumitsara miviri yaipoterera mambure emusoro mumwe nemumwe kuti afukidze misoro yembiru dzacho; ndizvo zvaakaita pamisoro yacho iri miviri. 19 Misoro yembiru dzacho dzaiva pavharanda yaiva yakagadzirwa semaruva, yakareba makubhiti mana. 20 Misoro yacho yaiva pambiru dzacho mbiri, nechepamusoro pechikamu cheraundi chainge chakabatana nemambure; uye pamusoro mumwe nemumwe paiva nemapomegraneti 200 aiupoteredza ari mumitsara.+ 21 Akamisa mbiru dzevharanda retemberi.*+ Akamisa mbiru yekurudyi* akaitumidza kuti Jakini,* uye akabva amisa mbiru yekuruboshwe* akaitumidza kuti Bhoazi.*+ 22 Kumusoro kwembiru dzacho kwainge kwakaita semaruva. Basa rekugadzira mbiru rakabva rapera. 23 Akabva agadzira Dziva* achishandisa simbi yakanyungudutswa.+ Rakanga riri reraundi, riine makubhiti 10 kubva kune rimwe divi remuromo waro kusvika kune rimwe divi remuromo waro, uye rakanga rakadzika makubhiti 5, uye paida tambo yakareba makubhiti 30 kuti uripoteredze.+ 24 Nechepazasi pemuromo waro paiva nezvinhu zvekushongedza zvakaita semanwiwa madiki+ zvakanga zvakaripoteredza rese zvaro, pakubhiti rimwe nerimwe paine 10, zvichipoterera Dziva racho rese, zvakaumbwa zviri paDziva racho mumitsara miviri. 25 Rakanga rakagadzikwa pamikono 12 yemombe,+ nhatu dzakatarisa kuchamhembe, nhatu dzakatarisa kumavirira, nhatu dzakatarisa kumaodzanyemba, nhatu dzakatarisa kumabvazuva; uye Dziva racho rakanga rakagara pamusoro padzo, dzese dzakafuratira pakati. 26 Ukobvu hwaro hwakanga hwakaita seupamhi hwechanza;* uye muromo waro wakanga wakagadzirwa semuromo wekapu, seruva rakatumbuka. Raigara riine mabhati* 2 000. 27 Akabva agadzira zvingoro 10*+ zvemhangura. Chingoro chimwe nechimwe chakanga chakareba makubhiti mana, chakafara makubhiti mana, uye chakakwirira makubhiti matatu. 28 Zvingoro zvacho zvakanga zvakagadzirwa seizvi: Zvaiva nemarata emumativi, uye marata acho emumativi aiva pakati pesimbi dzakachinjika. 29 Pamarata emumativi aiva pakati pesimbi dzakachinjika paiva neshumba,+ mikono yemombe, nemakerubhi,+ uye ndizvo zvakanga zvakaitawo pasimbi dzakachinjika. Pamusoro uye pasi peshumba dzacho nemikono yemombe paiva nezvekushongedza zvaimonereka. 30 Chingoro chimwe nechimwe chaiva nemavhiri mana emhangura nemaekisero emhangura, uye mumakona acho mana maiva nezvaitsigisa. Pasi pebheseni paiva nezvitsigiso zvakagadzirwa zviine zvekushongedza zvakamonereka padivi pechimwe nechimwe chazvo. 31 Bheseni racho rakanga rakakomberedzwa nekorona, rakadzika kubhiti rimwe chete. Rakanga riri reraundi, uye kubva pasi paro kusvika pamusoro pekorona yaro paiva nekubhiti nehafu, uye pamuromo waro pakanga pakatemererwa mifananidzo. Marata azvo emumativi akanga asiri eraundi asi aiva nemativi mana akaenzana. 32 Mavhiri acho mana aiva pasi pemarata emumativi, uye zvitsigiso zvemavhiri acho zvaiva zvakabatana nechingoro chacho, uye vhiri rimwe nerimwe raiva rakakwirira kubhiti nehafu. 33 Mavhiri acho akanga akagadzirwa semavhiri edzimwe ngoro. Zvitsigiso zvawo nemarimu, masipokisi, nemahabha awo, zvese zvakanga zvakagadzirwa nesimbi yaiita zvekunyungudutswa. 34 Paiva nezvitsigiso zvina pamakona mana echingoro chimwe nechimwe. Zvitsigiso zvacho zvakagadzirwa zvakabatana nechingoro chacho. 35 Kumusoro kwechingoro chacho kwaiva nechaiita sechibhandi chaipoterera, chaiva chakafara hafu yekubhiti, uye mafuremu nemarata ekumusoro kwechingoro chacho, akanga akagadzirwa akabatana nacho. 36 Pamafuremu acho nepamarata acho, akatemerera mifananidzo yemakerubhi, yeshumba neyemiti yemichindwe, zvichienderana nezvaikwana pafuremu neparata rimwe nerimwe, uye paivawo nezvekushongedza zvaimonereka zvichichipoteredza.+ 37 Aya ndiwo magadziriro aakaita zvingoro zvacho 10;+ magadzirirwo azvo zvese aiva mamwe chete,+ zvakanga zvakaenzana uye zvakafanana. 38 Akagadzira mabheseni emhangura+ 10; rimwe nerimwe raipinda mabhati 40. Bheseni rimwe nerimwe raiva makubhiti mana.* Pazvingoro zvacho 10, chimwe nechimwe chaiva nebheseni racho. 39 Akabva aisa zvingoro zvishanu kudivi rekurudyi reimba yacho, uye zvishanu kudivi reruboshwe reimba yacho, uye akaisa Dziva racho kudivi rekurudyi reimba yacho, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva.+ 40 Hiramu+ akagadzirawo mabheseni, mafoshoro,+ nendiro.+ Saka Hiramu akapedza basa rese raakaitira Mambo Soromoni paimba yaJehovha.+ Izvi ndizvo zvaakagadzira: 41 mbiru mbiri+ nemisoro miviri yakaita sehari yaiva pamusoro pembiru dzacho mbiri; mambure maviri+ ekufukidza misoro miviri yakaita sehari yaiva pamusoro pembiru dzacho; 42 mapomegraneti+ 400 emambure acho maviri, mitsara miviri yemapomegraneti pamambure mamwe nemamwe, kuti ifukidze misoro miviri yakaita sehari yaiva pambiru dzacho mbiri; 43 zvingoro 10+ nemabheseni 10+ aiva pazvingoro zvacho; 44 Dziva+ nemikono 12 yemombe dzaiva pasi peDziva racho; 45 nemakeni, mafoshoro, ndiro, nemidziyo yese yakagadzirirwa Mambo Soromoni naHiramu achishandisa mhangura yakakweshwa kuti ipenye, zveimba yaJehovha. 46 Mambo akazviumbira muforoma dzevhu mudunhu reJodhani, pakati peSukoti neZaretani. 47 Soromoni haana kuyera midziyo yacho yese nekuti yakanga yakawanda chaizvo. Kurema kwemhangura yacho hakuna kuzivikanwa.+ 48 Soromoni akagadzira midziyo yese yeimba yaJehovha inoti: atari+ yegoridhe; tafura yegoridhe+ yekuisira chingwa chekuratidza; 49 zvigadziko zvemarambi+ zvegoridhe rakanatswa, zvishanu kurudyi uye zvishanu kuruboshwe pamberi peimba yemukati; nemaruva akatumbuka,+ nemarambi, nezvekubvisisa tambo yapera kubvira,* achishandisa goridhe;+ 50 mabheseni, zvekudzimisa moto,+ ndiro, makapu,+ nemidziyo yekuisira moto,+ achishandisa goridhe rakanatswa; nemahinji emasuo eimba yemukati,+ kureva Nzvimbo Tsvenetsvene, neemasuo eimba yetemberi,+ achishandisa goridhe. 51 Saka Mambo Soromoni akapedza basa rese raaifanira kuita reimba yaJehovha. Soromoni akabva aunza zvinhu zvakanga zvatsaurwa* nababa vake Dhavhidhi,+ uye akaisa sirivha negoridhe, nemimwe midziyo maichengeterwa pfuma yeimba yaJehovha.+
^ Pagwatidziro pabango panenge pakabatirira gonhi kana kuti dhoo.
^ Kana kuti “ane mativi mana.”
^ Kana kuti “Vharanda reChigaro.”
^ Kana kuti “bhuronzi,” pano nepamwe pese pachatevera pane shoko rekuti mhangura muchitsauko chino.
^ Pano pari kureva Nzvimbo Tsvene.
^ Kana kuti “yekumaodzanyemba.”
^ Kureva kuti “Ngaasimbise [kureva Jehovha] Kwazvo.”
^ Kana kuti “yekuchamhembe.”
^ Zvinogona kunge zvichireva kuti “Nesimba.”
^ Kana kuti “tengi remvura.”
^ Angasvika masendimita 7,4. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ Kana kuti “zvingoro 10 zvekutakurisa mvura.”
^ Kana kuti “raiva rakafara makubhiti mana.”
^ Kana kuti “nembato.” Uyu mudziyo wakaita sechigero kana pinjisi waishandiswa kubvisa tambo inenge yabvira.
^ Kana kuti “zvaitwa zvitsvene.”
1 Madzimambo 7